(Last Nohavaozina: 18/09/2020)
Pisa dia amin'ny ankamaroan'ny mpandeha siny lisitra noho ny olo-malaza mirona Tower, Cathedral ny Santa Maria Assunta sy ny toerana miavaka. Fa ny tanàna mihitsy, ny sakany, ary mizarazara ny Arno River, Mendrika ny andro lavitra amin'ny fotoany avy izy! There are a good number of tranombakoka kely izay hijery, ary koa zaridaina. Ny Blu Palazzo monographic fampirantiana ihany koa ny manana ny zava-dehibe maoderina mpanakanto (Chagall, Miro sy vao haingana indrindra Toulouse Lautrec). Ary no Mpandinika ny sary an-drindrina farany indrindra nataon'ny Keith Haring, antsoina hoe Tuttomondo.
Ny iray amin'ireo andro malaza indrindra Trips avy Florence By Lamasinina dia ny Siena. Tsy nalaza noho ny Palio, izay ny soavaly hazakazaka fa mihazakazaka amin'ny alalan'ny koa malaza Piazza del Campo. Izany ihany koa fantatra amin'ny tsara tarehy Moyen Âge trano anivon'ny zavatra hafa. Siena dia tanàna fahiny feno Izao tontolo izao UNESCO lova toerana ary dia mendrika ny fitsidihana!
Nisy tanàna kely any amin'ny faritra tavoahangy, Greve dia miafina amin'ny vatosoa be dia be ny tantara, fomban-drazana, ary betsaka ny divay kolontsaina. Greve tonga lafatra ny andro diany avy any Florence hijery sy fandehandehanana mpanao asa tanana manodidina ny toeram-pivarotana, trano fisotroana kafe sy fivarotana kafe. Raha mitady ny aina andro, Greve dia mety ho tonga lafatra safidy.
Saturnia Spa dia tanàna ao amin'ny Central Avaratra Tuscany in Italia. Ny toerana tonga lafatra mba Manala sorisory. ny mafana loharano mafana in Saturnia are sulfurous springs in the middle of a valley and they are well known for their therapeutic properties, manolotra fialam-boly sy ny tsara amin'ny alalan'ny asitrika ho amin'ny andro rehetra.
Raha ao Florence, satria tia Renaissance kanto, voa ny Arezzo, adiny iray eo ho eo amin'ny fiaran-dalamby izy, ho an'ny hafa fomba fijery. Francesc Piero, izay sarin'ireo ny Duke sy Duchess ny Urbino ny hitanao eo amin'ny Uffizi, voaloko ny trano fiangonana avo amin'ity tanàna ity fiangonan 'i San Francesco. Ny sarotra fresco tsingerin'ny, misolo tena ny Tantara ny Marina Cross, dia iray amin'ireo tena nanan-kery tany am-boalohany Quattrocento, izay ny mpanakanto niasa avy ny maniacal hevitra ny toerana (Nisy fotoana mifototra amin'ny fomba fijery), asezare ny tony olo-malaza amin'ny loha miendrika atody.
Ahoana no ahafahantsika miala intsony eo amin'ny Venice 10 Trips Day By Train From Florence list? Venice dia iray amin'ireo tantaram-pitiavana indrindra sy destinos in Italia. Mampiseho an'arivony lakandrano, fomba Gothic lapa sy ny trano. Venice dia azo antoka iray amin'ny tanàna tsara tarehy indrindra anao ve ny. Na dia mety ho iray amin'ireo lafo indrindra. Andro iray lavitra dia mety ho iray amin'ireo safidy tsara indrindra raha tsy amin'ny mafy teti-bola.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “10 Trips Day By Train From Florence” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://embed.ly/code?url = ny https://www.saveatrain.com/blog/day-trips-from-florence/ ‎- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)